आजको राशिफल २०७८ साल भाद्र ८ गते मंगलबारGandaki Press
आजको राशिफल २०७८ साल भाद्र ८ गते मंगलबार
भदौ ८, २०७८ ०५:०१ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७८ साल भाद्र ८ गते मंगलबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ अगस्त २४ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, वर्षाऋतु, चान्द्रमान अनुसार भाद्रकृष्णपक्षको द्वितीया तिथि वेलुका ४:१७ बजेसम्म, त्यसपछि तृतीया रहनेछ ।
मेष : बन्दव्यापारमा नयाँ सम्भावनाहरु देखापर्नेछन् । अर्थाेपार्जनका कार्यको आरम्भ हुनेछ । मध्यान्ह पछिको समय प्रतिकूल रहनेछ । नराकारात्मक सोचाइ आउनेछ । व्यर्थको कार्यमा समय वित्नेछ । व्यर्थको कार्यमा समय वित्नेछ ।
वृष : सृजनात्मक कार्यमा मन जानेछ । मान्यजनको साथ सहयोगले कार्य बन्नेछन् । नयाँ जिम्मेवारी मिल्नेछ भने पूराना अधुरा कार्यलाई समेत पूरा गर्न सकिनेछ । आकस्मिक धन लाभको योग बनेको छ । खुसीको खबर मिल्ने देखिन्छ ।
मिथुन : धर्मकर्ममा रुचि बढ्नेछ । परोपकारी भावना जागृत हुनेछ । सहमति र सहकार्यकोले गर्दा कार्य सहज बन्नेछ । सामान्य मिहिनेतले नै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ । विश्वास दिलाउन सक्दा नयाँ जिम्मेवारी मिल्नेछ ।
कर्कट : पूर्वाद्र्धको समय तनाबदायी रहनेछ । कठोर बोली व्यवहारका कारण मान्यजनसँग विवाद पर्नेछ । मध्यान्ह पछिको समय केही सुधारोन्मुख रहनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । आर्थिक लाभ एवं नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछ ।
सिंह : आकर्षण शक्ति बढेर जानेछ । सान्दर्भिक कार्यको थालनिले गर्दा धेरै व्यक्तिको साथ, समर्थन मिल्नेछ । उत्तराद्र्धको समयमा अनावश्यक खर्च एवं चिन्ताले सताउनेछ । शारीरिक कमजोरीले काम गर्न मन लाग्ने छैन ।
कन्या : विपक्षीलाई पनि मिलाएर कार्य गर्न सकिनेछ । नयाँ स्थानको भ्रमणको योग देखिन्छ । आर्थिक लगानिले भविष्यमा लाभ लिन पाइनेछ । शेयर बजारमा गरेको लगानिले पछिसम्म लाभ लिन सकिनेछ । दृढ भएर कार्यमा लाग्नुहोला ।
तुला : काम गरेर आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ । शैक्षिक क्षेत्र एवं प्रतिष्पर्धात्मक कार्यमा विजयी भइनेछ । व्यवहारिक कार्यको ज्ञान मिल्नेछ । बेलुकी पख स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखिन सक्छ, खानपान एवं व्यायाममा ध्यान दिनुपर्नेछ ।
बृश्चिक : अनावश्यक खर्च भार थपिनेछ । झन्झटीला कार्यको नेतृत्व गर्नुपर्ला । आफन्तहरु टाढिनेछन् । तर बेलुकी पख पुराना समस्या सुल्झाउन सकिनेछ । आफन्तजनसँगको रमाइलो जमघट हुनाले हर्ष बढ्नेछ ।
धनु : सहोदरका व्यक्तिको साथ सहयोगले कार्य बन्नेछन् । बल, बुद्धिको सही ठाउँमा प्रयोग हुनेछ । मध्यान्हपछि तनाबदायी कार्य गर्नुपर्नेछ । आर्थिक लगानिले समस्या थपिनेछ । हचुवाको भरमा निर्णय नलिनु होला ।
मकर : आर्थिक पक्ष बलियो रहला । गरेका काम कार्यबाट सकारात्मक नतिजा आउनेछन् । श्रमको उचित मूल्यांकन मिल्नाले काम गर्ने हौसल थपिनेछ । स्वास्थ्य समस्यामा सुधार भएर जानेछ । दिन हर्षाेल्लास पूर्वक वित्नेछ ।
कुम्भ : धन सञ्चयको वातावरण बन्नेछ । नयाँ ज्ञान, सिप सिक्न पाइनेछ । अध्ययन एवं सामाजिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । इष्टमित्रको साथ, सहयोग पाइनेछ । नयाँ पदप्रतिष्ठा मिल्नेछ । व्यवस्थापन पक्ष सबल रहनेछ ।
मीन : पारिवारिक समस्याले कार्य गर्न सकिने छैन । कष्टको सामना गर्नु पर्नेछ । खर्चभार बढ्नेछ । मध्यान्ह पछि अनुकूलको वातावरण बन्नेछ । विशेष अवसर मिल्नेछ । नेतृत्वदायी कार्यको अविभारा मिल्नेछ ।